Su'aal Boeing 737-8 MAX & Boeing 737-9 MAX
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #361 by Colonelwing
Boeing 737-8 MAX & Boeing 737-9 MAX NEW horumarka
sano 2 3 bilood ka hor #368 by Gh0stRider203
Colonelwing qoray: Haddii aan la Boeing ,,, waxaan aan la socday ku amartaa ku yaal!
AAMIIN Colonel IN!
kaliya AAN Boeings American Airways VA uu leeyahay waa Concorde, a C-130, C-123, DC-10-30F, ERJ-145, ER600 (oo waa inaan qirto waa diyaarad aad u qurux badan!), oo ah Dash-8 (oo aan ahay qeybiso u leeyihiin in ay xaalkaa file aircraft.cfg ee).
The C-123 waxaa dhab ahaan loo xilsaaray in ay saaxiib wanaagsan ee Mine oo diyaarad la soo dhaafay aabbihiis ahaa on a C-123 on 27 June, 1965. Waxaa wax laga xumaado, in uu yahay mid ka mid ah dad badan kuwaas oo weli ku sii qoran sida la'yahay In Action ka Vietnam.
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #370 by Colonelwing
Badan POW / duulankii at periode in ...
Sorry aad saaxiib badiyay ,, waxaa la soo dhaafay on ...
The Fairchild C123 "Provider" waxa uu ahaa a nidaamka weerarkii habeenkii / gaadiidka
diyaarad ku salaysan dayuurad yar oo dhan-bir ah loogu talagalay by Chase Diyaaradaha. The
diyaarad ee noocooda C123B ugu horeysay u duulay on September 1, 1954.
Rank / Branch: O3 / Air Force US
Unit: 1st Flight go'idda,
MACV-SOG 1131st Hawlaha gaarka ah ee Qiimeynta,
Taariikhda Dhalashada: 28 January 1930
Taariikhda Loss: 27 June 1965
Status (in 1973): dilay In Action / Body weyday
Ciidanka Cirka ee Capt. Carl E. Jackson
sano 2 3 bilood ka hor #375 by Gh0stRider203
Haaa in aabbihiis uu.
dhab ahaan waan ku xiran POW a / duulankii jijin for a Captain Ronald W. Forrester, USMC oo lagu toogtay hoos North Vietnam on 27 December, 1972. wuxuu ahaa Navigator / Bombardier ku tuugu A-6 ah. Waxaan si dhab ah saaxiibada la dhigtay gabadhiisa on facebook via saaxiib dhawr sano ka dib, iyo sidaan u sameeyey wax inuu maamuuso aabbeheed sannad walba tan. Waxaan xirto jijin in hadda 13 sano.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.209